February 2021 – Page2– Shwe Yaung Lan
[ February 28, 2021 ] လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးရင် အန္တရယ်ကနေ ကံကောင်းစွာလွတ်မြောက်လာဆကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့ တိုင်ရွန်	Celebrity
[ February 25, 2021 ] ရောင်းဖို့မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ထီအထုပ်ကနေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ပေါက်ခဲ့	Knowledge
[ February 25, 2021 ] Qwer Qwer	Celebrity
[ February 25, 2021 ] ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကျေပွန်ပြီး အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားပေးနေတာကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကသတင်းမှာပါဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်များ	Celebrity
[ February 25, 2021 ] ကျောကုန်းပေါ်မှာ ဆိုလာပြားနဲ့ သတ္ထုမျှဉ်တွေပါတဲ့ သိန်းငှက် ရုပ်သံ ထွက်လာပြီ	Knowledge
တော်ရုံတိုက်ဆိုင်မှုလား၊ သံသရာ တစ်ပတ်လည်တဲ့ သဘောမျိုးလား
February 16, 2021 Writer Magic 0
အခုတလော မြန်မာပြည်တွင်းမှာ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လူတွေထဲက အချို့ဟာ ၈၈ အရေးအခင်းတုန်း ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေနဲ့ ရုပ်ချင်း ဆင်တူနေတာကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ တစ်ချို့သော အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါ ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီး သံသရာ တစ်ပတ်လည်တဲ့ သဘောမျိုးလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ကြည့်ရှုပေးကြပါအုံးနော်။ Photo – Original သတင်းဓာတ်ပုံ သတင်းဓာတ်ပုံ […]
မျက်ရည်ယိုဗုံး ပစ်ခံရရင် ချက်ချင်းဒါတွေလုပ် ( ပြန်လည်မျှဝေးပေးပါရန် )
February 15, 2021 Writer Magic 0
မျက်ရည်ယိုဗုံး ပစ်ခံရသောအခါ မျက်ရည်ယိုဗုံးထံမှ ဝေးရာသို့ မြန်မြန်သွားပါ။ လေကောင်းလေသန့်ရတဲ့နေရာသွားပါ။ ရေနည်းနည်းမလောင်းပါနဲ့။ ရေများများနဲ့ လောင်းချပါ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားရရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားပါ။ ဂက်စ် ဆိုပေမယ့် အသားကိုထိရင် လောင်တတ်တဲ့ ဓာတုမှုန့် ပေါင်ဒါများဖြစ်။ ပါးစပ်လုံးဝ မဟရ။ ရေနဲ့ဓာတ်ပြုလွယ်တဲ့ အမှုန့်ဖြစ်လို့ မျက်ရည်၊ ချွေး၊ တံတွေးတို့နဲ့ ဓာတ်ပြုမိတိုင်း ပိုမိုနာကျင်တတ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်။ ရေငွေ့ရှိတဲ့နေရာကို အမှုန်ကသွားဓာတ်ပြု။ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ရေမွန်းသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်းများ […]
ဖမ်းထားတဲ့သူတွေ ဆီကနေ တွေ့ရတဲ့ အရုပ်တွေပါ ( သတိထားတာ မမှားပါဘူး )
ဒီအရုပ်တွေက ဖမ်းထားတဲ့လူတွေဆီက တွေ့တာပါ သတိထားကြပါ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ၃ယောက်ရှိပါပြီ။ အရုပ်ကအနီမှာ အပ်နဲ့ထိုးထားပါတယ် အရုပ်ကိုခွဲကြည့်တော့ ခေါင်းနဲ့ ကိုယ်ထဲမှာနေကြာစေ့တွေ တွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့်အိမ်တွေ ကြားထဲပျောက်သွားတာတွေ၊ နံရံပေါ်မှာပျောက်သွားတာတွေ ဖြစ်နေတာ။ လူတွေလဲကြောက်စိတ်ဝင်နေတာ အဲ့ဒါ​တွေကြောင့်ပဲဖြစ်မယ် နောက်တခါ တွေ့ရင် – အကုန်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ “သင်သည် ငါတို့လူ့ကမ္ဘာနှင့်မဆိုင်ပါ သင်၏အပေါင်းအပါများပါခေါ်ထုပ်သွားပါ ”ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါ ရွတ်ပါ ပြီးလျှင်“အကယ်၍ ထက်ပြီးနှောက်ယှက်ပါက သင်နှင့် သင့်အားခိုင်းစေသူအပါအဝင် အပေါင်းအပါများပါ သာသနာဆောင့် နတ်နဂါးများ၏ အမြတ်မျက်ဆောင်းဖြင့်ကျခံစားရပါစေသား”ဟု […]
သင့်ရင်ဘက်ကို ထိရှစေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန္ဒပြ လူငယ်တွေရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ် ပုံရိပ်များ
သင့်ရင်ဘက်ကို ထိရှစေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ် ပုံရိပ်များ ကဲ…မြင်တဲ့တိုင်းပဲဝိုင်းပြောကြပြန်တော့အပြောင်ပျက်လျှော့ပီးချက်ချင်းseriousဖြစ်ပေးကြရှာတယ်တကယ့် တော်၊ကောင်းတဲ့မျိုးဆက်တွေ GenZmadeburmagreat RejectMilitaryCoup Credit – Original သတင်းဓာတ်ပုံ ၁ သတင်းဓာတ်ပုံ ၂ သတင်းဓာတ်ပုံ ၃ သတင်းဓာတ်ပုံ ၄ သတင်းဓာတ်ပုံ ၅ သတင်းဓာတ်ပုံ ၆ သတင်းဓာတ်ပုံ ၇
ရန်ကုန်မြို့မှာ တင့်ကားတွေနဲ့ လှည့်လည်နေစဥ်မှာ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက We Do Not Want Military Goverment အစရှိတဲ့ စာရွက်တွေကို ကပ်သွားကြပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံတွေဟာ ဒီနေ့ အင်တာနက်မှာ လူပြောများနေပြီးတော့ ပြည်သူတွေအချင်းချင်း မျှဝေမှုတွေ ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Photo – Original 1234567
ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူ ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အသက်၉၀အရွယ် ဘဘ မောင်မောင်မြင့်ရဲ့ပုံရိပ်လေးနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
February 14, 2021 Writer Magic 0
ပရိသတ်ကြီးရေ ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နေရာအနှံ့အပြားမှာ ပြည်သူတွေသန်းနဲ့ချီပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေ တော်တော်များများကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပါဝင်ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီထဲမှာမှ ဘဘ မောင်မောင်မြင့်ကလည်း ပြည်သူပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ရှိနေကြောင်း သူတတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းလေးစားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဘဘရဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit Cele Zone
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နှစ်သစ်တစ်ခုမစခင်မှာ နှစ်သစ်တွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများသော အခြင်းအရာများအား ကြိုတင်နိမိတ်ထုတ်လေ့ရှိပါသည်။ ၁။ အချို့သော လက်နက်ကိုင်များဖြင့် ချစ်ကြည်ရေးဖြစ်ပြီး ပြေလည်မှုများ ဖြစ်တတ်သည်။ ၂။ ပြည်တွင်းစစ်များ သိသာစွာ အားနည်းလာတတ်သော်လည်း စီးပွားရေးထိုးစစ်များဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်များ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ၃။ မြန်မာပြည်ကြီး ၏ အမြင့်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းများစွာတို့ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်တတ်သည်။ ၄။ ဩဇာအာဏာကြီးမားသော ဆရာတော်ကြီးများ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ သုံးပါး သို့ သုံးယောက် သေဆုံးမှု ဖြစ်မည်။ […]
အင်တာနက်ကြီး ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook နဲ့တခြားapp တွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း………..Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး)
February 13, 2021 Writer Magic 0
Internet ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook အပါအဝင်တခြားappတွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း။ Speedify ကမြန်မာပြည်မှာ Internet ပိတ်ဆို့မှုတွေကို Awareness ရတဲ့အတွက် အစိုးရက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ App ကိုသုံးပြီး Internet အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Download လုပ်ပြီးတာနဲ့ 50G free သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ ချွေတာသုံးဖို့လဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Visa Master တွေပါပိတ်ပစ်ရင် ဝယ်မရမှာစိုးလို့ပါ။ 1. App ကို အရင် download ပါ 2. […]
ကံထူးရှင်တိုင်း ဖတ်ခွင့်ရမည် ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ..။ သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ခေါင်မိုးတစ်ခုရယ် … နောက်ကျောခင်းအိပ်စရာ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထက် ပိုမိုချမ်းသာပါတယ် ။ သင့် ဘဏ်ထဲမှာရော သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရောနောက်ပြီး အလွယ်သုံးစရာ အကြွေငွေစလေးတွေရှိနေရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာ (၈) ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှိတဲ့ …ချမ်းသာသူ စာရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီ ။ သင်ဟာ […]
ခရစ်နှစ် (1910)ခန့်ကကြိုတင် ဟောကြားခဲ့သောကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါးပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့်အကြောင်း
ခရစ်နှစ် (1910)ခန့်ကကြိုတင် ဟောကြားခဲ့သောကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါးပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့်အကြောင်း ကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါး ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခရစ်နှစ် (1910)ခန့်ကကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့သော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး မြန်မာပြည်အား အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီခေတ်တွင် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားသီတင်းသုံးနေသော ကျောင်းသို့ အင်္ဂလိပ် နယ်ပိုင်မင်း သမီး ” မက်ကလပ် မေရီ” တစ်ယောက် ရောက်ရှိလာသည်။ထိုအင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီးသည် ခရစ်ယာန် မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူးပြောင်း […]
လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးရင် အန္တရယ်ကနေ ကံကောင်းစွာလွတ်မြောက်လာဆကြောင်းပြောပြလာခဲ့တဲ့ တိုင်ရွန်
ရောင်းဖို့မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ထီအထုပ်ကနေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ပေါက်ခဲ့
ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကျေပွန်ပြီး အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားပေးနေတာကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကသတင်းမှာပါဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်များ